High Quality Mkpọchi Mkpụrụ Manufacturer na Supplier | Yanzhao
Mkpọchi Mkpọchi Mkpụrụ niile nwere atụmatụ na -emepụta ọrụ "mkpọchi" na-adịgide adịgide. Mkpụrụ Mkpọchi Mkpọchi na-aga n'ihu na-adabere na nrụrụ na-agagharịrịrị ma ọ ga-abụrịrị iwe ma gbanyụọ; ha abụghị kemịkal na ọnọdụ okpomọkụ pere mpe dịka Naịlọn Fanye Mkpọchi Mkpụrụ mana ijigharị ejigharị. Mkpụrụ Mkpọchi K-mkpọchi na-akwụ ụgwọ ma na-eweghachi ya. Ojiji nke naịlọn Insert Lock Mkpụrụ dị ụkọ na onye na-adọrọ adọrọ naịlọn nwere ike imebi ụfọdụ kemịkal na oke okpomọkụ; A na-achọkwa ịkọ mkpụrụ ahụ ma gbanye ya. Zinc plated nchara mkpụrụ ruo klas 10 na igwe anaghị agba nchara nwere ahịhịa na igwe dị mma nwere ike ị nweta. Mkpọchi mkpọchi ndị a nwere ntinye naịlọn nke na-ejide ihe nkedo n'emebighị eri ha. Ha nwere eri di nma, nke di nso karia eri na-adighi nma ma o yikarighi ka o nwere ike igbatu. Ezi eri na eri adighi adighi nma. Mkpọchi ndị a na-emegharị emegharị mana ejighi ikike ijikwa ya rụọ ọrụ ọ bụla.
Enwere ike iji mkpọchi Mkpụrụ maka ọtụtụ ngwa dị iche iche gụnyere ịgụnye osisi, nchara, na ihe ndị ọzọ na-ewu ihe maka ọrụ dịka ọdụ ụgbọ mmiri, àkwà mmiri, usoro okporo ụzọ, na ụlọ.
Black-oxide nchara kposara na-adị nwayọọ na-eguzogide ọgwụ na gburugburu akọrọ. Zinc-plated nchara kposara iguzogide corrosion na mmiri gburugburu. Black ultra-corrosion na-eguzogide-ntekwasa ígwè kposara iguzogide Chemicals na idi 1000 awa nke nnu spray.Coarse eri bụ ndị ụlọ ọrụ ọkọlọtọ; họrọ ndị a Hex akụ ma ọ bụrụ na ị na-amaghị eri kwa inch. Ezi na mmezi-ezi eri na-spaced spacte gbochie loosening si vibration; nke ka mma na eriri ahụ, ka mma na-eguzogide ya.
The mkpọchi akụ e mere iji dabara a ratchet ma ọ bụ spanner torque wrenches-ekwe ka ị ikesiike mkpụrụ gị kpọmkwem nkọwa. Dedị 2 bolts agbasaghị-eji na-ewu maka isonyere osisi mmiri. A na-eji ọkwa 4.8 eme ihe na obere engines. N'uzu 8.8 10.9 ma ọ bụ 12.9 bolts na-enye nnukwu ike ọdụdọ. Otu uru ngwa ngwa nwere ihe karịrị welds ma ọ bụ rivets bụ na ha na-enye ohere maka mgbasasị dị mfe maka ndozi na ndozi.
Eriri nha M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P Ẹtop 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2,5 3 3.5 4
Nkeji 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
Dw Nkeji 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49 Ogbe 27.7 33.25 42.75 51.11
e Nkeji 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 32.95 Ogbe 39.55 50.85 60.79
h Max 7.2 8.5 10.2 12.8 16.1 18.3 Ogugu 20.7 25.1 29.5 35.6 42.6
Nkeji 6.62 7.92 9.5 12.1 15.4 17 Ugwu 19.4 23 Ogbe 27.4 33.1 40.1
m Nkeji 4.8 5.4 7.14 8.94 Ogbe 11.57 13.4 15.7 19 22.6 Ezi 27.3 33.1
mw Nkeji 3.84 4.32 Ugboro 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6 15.2 18.1 21.8 26.5
Nkeji 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
ibu ibu()≈n'arọ 1.54 Ugboro abụọ 6.1 11.64 17.92 27.37 40.96 73.17 Ogbe 125.5 256.6 441
Nke gara aga: Hex Mkpụrụ
Osote: Flange Mkpụrụ
Mbadamba Carbon Nchara
High Locknuts Ike
Black Oxidation Hex mkpọchi, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Mkpọchi, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Nnukwu Ike Hex Bolts, Din6921 Flange Mkpụrụ,